Ngokuqinisekile bonke abesifazane baye bezwa ngokucubungula - inqubo yokuzithokozisa. Iningi labesifazane bayaqonda ukuthi le nqubo kufanele yenziwe ngokusemthethweni, ngaphandle kwalokho ungagula ngaphambi kwesikhathi, ikakhulukazi ezimweni okufanele siphile futhi sisebenze namuhla.
Ukuzindla ngokujulile kungenye inqubo edingekayo, kodwa akuncane kakhulu ukukwenza. Namuhla ngobuhle be-salon banganikeza ubuso obujulile bokugaya i-pilling kanye ne-lip peeling. Ngokuvamile, siyikhohlwa ukukhipha isilwane, njengoba sibheka ukuthi i-balm yokuhlanzeka kanye ne-lipstick yanele ukuhoxiswa. Noma kunjalo, isikhumba sezindebe sihlushwa kakhulu kunesikhumba sonke sobuso, ngoba isikhumba sezindebe sincane kakhulu, ngakho-ke lapho kuqala ukushisa kuqala ukuma, kugubungele ukuphazamiseka, okubi. Kodwa-ke, kaningi kunalokho, siyakhathazeka ngenxa yamangqamuzana afile, ama-shreds kanye nokuqhekeka, okusivimbela ukuba sisebenzise i-lipstick ukuze sisize izindebe zethu, ngenxa yalokho, sibonakala singenangqondo futhi singenalutho.
Ukubukeka ngokujulile ngobuhle be-salon kwenziwa ngokusemthethweni nangokwemfanelo, kodwa kubalulekile ukucabangela ukuthi kuyadingeka ukwenza le nqubo nyanga zonke, futhi le nqubo ayishibhile. Futhi ngaphambi kokuba kukhonjiswe, ububele nokunciphisa kwezindebe kungagcinwa ngosizo lwabantu abahlolwayo ngesikhathi esizame, kodwa kuzodingeka ukuthi lisetshenziswe inyanga kaningi ngaphezu kwesisodwa.
Senza izindlu ze-peelingurb
I-lip elula kakhulu evezwayo uju, indlela efanayo iyacatshangwa ukuthi iphumelele nakakhulu, njengoba uju ihlanza futhi igcoba isikhumba sezindebe. Uju oluthe xaxa luhlanza isikhumba sezindebe, luyondla futhi luvuselele. Ngokuvamile, uju yindawo yokugcina yangempela yemvelo. Senza umkhiqizo wokuhlobisa: uju uxubene ne-saccharomis ekubalweni kwe-1: 2 (ukulinganisa i-isipuni isetshenziswa) futhi sigubha umthamo wokufaka unamathisele, osetshenziselwa imizuzu engamashumi amathathu kuya kwamashumi ayisithupha esikhumbeni sezindebe. Ngemuva kwesikhathi ushukela esele ususiwe esikhumbeni sezindebe ngesikhumba somzimba esiyinkimbinkimbi. Izindebe zingasetshenziswa imizuzu engu-15 (imizuzu engaphansi kwezingu-10) uju othosiwe, ukusikhipha umzimba (kuphela ngobumnene) futhi ugeze ngamanzi afudumele, bese usebenzisa i-naliba noma u-ukhilimu owondlayo.
Enye indlela yokubheka ushukela noju: uju luxubene noshukela (isipuni esingu-1: isipuni 1) bese ufaka i-microwave imizuzu embalwa. Izindebe ezitholakalayo zamagesi futhi sithatha amaminithi ambalwa, sinobukhulu, sihlamba futhi sibeka i-balm noma ukhilimu. Ukuze uphuthukise, kungcono ukuthatha ushukela omanzi omningi ngempela ukugaya (kuyasiza kakhulu), uma uthola ushukela, bese uhlanza isikhumba sezindebe ungathatha ushukela.
Ukudla, ukuhlanza nokuphatha isikhumba sezindebe ezinjengokubheka: i-soda noju ngezinga le-1: 1 (ukulinganisa - isipuni esingavamile) kuxutshwe, kusetshenziswe imizuzu engu-3 ezindebeni, ngokuphunga ngokucophelela, bese kuhlanzwa ngamanzi afudumele. Kumaseli afile ngokushesha futhi kalula ahlukane, ungasebenzisa i-toothbrush (ngokukhethekile ithambile).
Ukubheka ukasawoti kanye noshukela ngeVaseline kuyindlela enhle yokusiza izindebe ezivelayo nezomile kakhulu. Lokhu kuhlotshaniswa kuneluleka ukuba wenze izikhathi ezingu-2-3 zonke izinsuku. Izithako zixutshwe ezingxenyeni ezilinganayo futhi zisetshenziselwa izindebe. Khona-ke, ngesisindo esiyindilinga, ngokucophelela uphumule isikhumba sezindebe, bese ugeza mass ngamanzi afudumele.
Esikhathini sikhumba sasinobuciko futhi sinethenda ezindebeni, udinga ukusebenzisa ukuhlunga ukhilimu kanye nosawoti omuhle kakhulu. I-Cream exutshwe nosawoti bese isetshenziselwa izindebe. Ngemuva kwesicelo kuyadingeka ukuba uhlaziye, ukhululeke kancane kancane amangqamuzana afile, bese ususa amanzi amaningi afudumele bese ugcoba izindebe ngamafutha omnqumo noma ukhilimu onomsoco.
Ukuze uhlolisise, ingxube ingenziwa nge-aspirin kanye noshukela-isebenza ngendlela efanayo nenqubo ye-salon isebenzisa i-alpha-hydroxy acid ne-salicylic acid. Ushukela sithatha umoba omncane (ingxube isuke ithambile) exutshwe ne-aspirin powder (1: 1), engeza i-glycerin ne-jojoba oil (thatha amaconsi amaningana). Faka isicelo emilonyeni, shiya imizuzu engu-10, kancane kancane bese ugeza ngamanzi ashisayo.
Ukucubungula sisebenzisa i-oatmeal ne-cottage shizi: 1 tbsp. l. i-fatty cottage cheese exutshwe nama-oat flakes (ngaphambi kokusika) futhi isetshenziswe ezindebeni. Isikhumba sithweswa kahle ngokusuka emaceleni kuya enkabeni. Ubuningi buhlanjululwa ngamanzi afudumele.
I-oat flakes ingaxubaniswa nanoma yimaphi amafutha yemifino, isetshenziswe esikhunjeni sezindebe futhi ixiliswe - ukuphulukiswa okuhle kwemifantu emincane.
Noma yiziphi izindlela zokupheka zingathuthukiswa ngokungeza amafutha abalulekile.
Isibonelo, kuya kwesisindo se-tsp eyodwa. ushukela nesigamu esisodwa. l. i-medayi yamafutha omnqumo (futhi futhi isipuni 1) ungangeza amafutha omnqumo (amaconsi angu-2-3), ugaye ngokucophelela uphinde uthole i-gruel ukugcoba izindebe zakho imizuzu embalwa.
Izindebe ezinamahloni, ukuhlunga ilamula kalamula. Hlanganisa namafutha we-castor ngesilinganiso se-1: 1 (ukulinganisa - isipuni), kunezansi ezimbalwa ze-glycerin. I-mask isetshenziswa ezindebeni futhi ishiya ubusuku bonke. Izinsalela zisusiwe ekuseni ngendwangu ebomvu.
Ukuze uhlolisise, ungasebenzisa noma yimaphi ama-moisturizer. Ama-Creams ezindebeni, bese ngobumnene futhi ngobumnene behlushwa amazinyo-amangqamuzana afile aphelile, isikhumba sezindebe siba lula.
Ngemuva kokuhlolisisa kahle, sinakekela izindebe
Ngemuva kokucubungula, kunconywa ukuba uhlale unciphisa noma ufaka imilomo enomsoco, kudingeka adluliselwe imizuzu eyishumi nanhlanu. Ukuphuza ukuphuza okunomsoco noma okunomsoco wokuphuza, ukhilimu, ikakhulukazi, isisindo somzimba, ngoba amangqamuzana omzimba wesikhumba, ngemuva kokukhishwa kwamaseli endala, asengozini kakhulu ekuqaleni, ngakho-ke adinga ukuvikelwa okukhethekile.
Izinkomba zokuqhathanisa ukuhlanzwa ngezindlebe
Ukuqhekeka okujulile esikhumbeni sezindebe, ikakhulukazi emagumbini.
Izifo ezithathelwanayo nezifo.
Ukuphuza noma ukuvuvukala kwezindebe.
Ezimweni ezinjalo, kufanele ulashwe kuqala, bese uqala ukunakekela izindebe zakho ekhaya noma usebenzisa izimonyo.
Izihlahla zingasetshenziswa ezindebe futhi isikhumba esizungezile cishe ku-1 cm. Amaseli amaningi afile aqoqa njalo emaceleni omlomo, ngakho kufanele ahlanzwe.
I-soap yaseTar kusuka ku-acne
Ukunakekelwa kwekhaya kwesikhumba samafutha
Usizo Lokuqala Lobuhle: Amathiphu Angu Aphezulu kusuka kuGuerlain
Izitsha ezihlwabusayo nezithakazelisayo ze-Lent
Izindlela zanamuhla zokukhulelwa kwezingane
Ngiyindoda enhle kunazo zonke futhi ekhangayo
Summer Colorful: BAON Collection by Liasan Utiasheva S / S 2017
Indlela yokuvuma kumfana othandweni, uma ekhona empini?
Isaladi "Grinnie" ngezinhliziyo ze-turkey no-g g
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokuzivocavoca futhi ngaphandle kokudla?
Indlela yokuzenza uhlanzeke
Iyiphi imbiza okumele ikhethe ingane?
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-quartz ephunga
Ukwelashwa kwe-preeclampsia ekhaya
Ungasusa kanjani amaphuzu amnyama ebusweni masinyane nangempumelelo?
Iresiphi ye-kvass kusuka ku-juice ye-birch
5 ama-jammers ubuhle
Ithebula lezinhlawulo ze-glycemic yemikhiqizo: senza ukudla okunembile kokulahlekelwa isisindo
Imithetho yokuziphatha ohambweni lwe-ski